Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Malta mepere ndị America gbara ọgwụ mgbochi ọrịa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Nlele ikuku nke obodo atọ, Vittoriosa, Senglea na Cospicua
Michelle Buttigieg, onye nnọchi anya North America maka ikike nlegharị anya Malta, na -aga izu izu njem Virtuoso n'onwe ya, wetaara ndị ndụmọdụ Virtuoso njem ọ zutere ozi ọma. Malta, otu agwaetiti dị na Mediterenian, kwupụtara na nso nso a na ọ mepere ndị America ọgwụ mgbochi nwere ike nyochaa ozi ahụike ha site na ngwa dijitalụ akpọrọ Verifly. Nwada Buttigieg kwuru na "Malta, ugbu a, nwere ihe ndị ọzọ ọ ga-enye onye njem okomoko ahụ ụlọ ọhụrụ kpakpando ise, ọnọdụ ọdịmma/spa ọhụrụ, ụlọ oriri na ọ Micheụ Micheụ Micheal Michelin Star na ahụmịhe ndị a gwọrọ agwọ."
Malta na-ewepụta uzommebe kachasị maka okomoko, na-egosipụta ọtụtụ ụlọ okomoko site na ụlọ kpakpando ise, ụlọ nkwari akụ okomoko, ruo palazzos na ụlọ ugbo.
Ndị ọbịa nwekwara ike ịnụ ụtọ ahụmịhe ọgwụgwọ site na ịgagharị elekere nke saịtị ndị mere eme ruo n'ịgbazite ụgbọ mmiri.
Ọ dị mfe ịnweta Malta site na nnukwu ọnụ ụzọ ámá ndị Europe.
Michelle Buttigieg kwukwara na enwere nnukwu mmasị na obi ụtọ n'etiti ndị ndụmọdụ Virtuoso ka ha nwee ike nye ndị ahịa ha ahụmịhe okomoko na ebe ndị na-asụ Bekee, na-ejupụtaghị ọnụ karịa ọtụtụ ebe nkiri akụkọ ihe mere eme Europe na-ewu ewu, yana ụdị dị iche iche nke nwere ihe maka onye ọ bụla. Mazị Buttigieg kwuru na "Malta na-ewepụta usoro nri kacha mma maka okomoko, na-egosipụta ọtụtụ ebe obibi okomoko site na ụlọ kpakpando ise, ụlọ oriri na ọutiụ hotelsụ okomoko, na ụlọ akụkọ ihe mere eme na ụlọ ugbo." “Ndị ọbịa nwekwara ike ịnụ ụtọ ahụmịhe echekwara site na ịgagharị elekere nke saịtị ndị mere eme ruo n'ịgba ụgbọ mmiri. Enwere ike ịchọta ahụmịhe okomoko a niile na Malta ma e jiri ya tụnyere ọnụ ahịa ụlọ na njem ndị pụrụ iche na mpaghara Europe. ” Ọ dị mfe ịnweta Malta site na nnukwu ọnụ ụzọ ámá ndị Europe.
Izu Njem Virtuoso na Las Vegas bụ mmemme obodo na -eme njem zuru ụwa ọnụ kacha eme kwa afọ maka ndị otu Virtuoso zuru ụwa ọnụ, ndị ndụmọdụ, na ndị mmekọ ahọrọ. Nanị na netwọkụ Virtuoso, ọ nwere nhọpụta netwọkụ nkeonwe, ohere mmepe ọkachamara dị ukwuu, Globetrotting Community, na mmemme nke Virtuoso, netwọkụ njem okomoko kachasị elu n'ụwa.
The agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi dị oke egwu nke ihe nketa ewuru emebi, gụnyere njupụta kachasị elu nke saịtị UNESCO World Heritage saịtị na obodo ọ bụla. Valletta, nke ndị Knights dị mpako nke St. John wuru, bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital of Culture maka 2018. Ọchịchị Malta na okwute sitere na ntọala ụlọ ochie kacha ochie na-akwụghị ụgwọ na ụwa, ruo na otu n'ime Alaeze Ukwu Britain. usoro nchekwa dị egwu, yana gụnyere ngwakọta bara ụba nke ihe owuwu ụlọ, okpukperechi na ndị agha site na mgbe ochie, etiti na mmalite nke oge a. Site na ihu igwe na -acha anwụ anwụ nke ukwuu, osimiri mara mma, ndụ abalị na -eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na -akpali mmasị, enwere nnukwu ihe ịhụ na ime. www.visitmalta.com